Amin’ny 6 Febroary 2019 no Hivoaka ny Didim-pitsarana Momba An’i Dennis Christensen
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Koreanina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
31 JANOARY 2019
Ny Fitsaram-paritr’i Zheleznodorozhniy any Oriol no nikarakara ny raharaha mahakasika an’i Dennis Christensen, ary nilaza ny mpitsara fa amin’ny alarobia 6 Febroary 2019 izy no hamoaka ny didim-pitsarana farany.
Tamin’ny 25 Mey 2017 no nosamborina ny Rahalahy Christensen, ary tamin’izay izy no nanomboka nigadra. Tamin’ny 19 Febroary 2018 no nanomboka ny fitsarana azy. Raha melohin’ilay fitsarana izy dia higadra enin-taona sy tapany.
Tsy kivy ny Rahalahy Christensen fa matanja-tsaina foana, na dia efa ho roa taona aza izy izay no nigadra. Matoky tanteraka an’i Jehovah izy sady faly hoe mivavaka ho azy ny mpiara-manompo maneran-tany.—2 Tesalonianina 3:1, 2.